Ukutya kunye nezongezelelo zezinto eziphilayo.
Ummangali wezongezo zokutya unyaka ngamnye uya kuba ngaphezulu. Ngoko yintoni na - umvuzo kwifashoni okanye imfuneko? Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nezibonelelo ze-biological, funda kule ngcaciso.
Qinisekisa, yintoni obenayo isidlo namhlanje: enye iswitshisi okanye i-vermicelli yokutya okukhawuleza? Okanye mhlawumbi bekungekho ixesha elaneleyo lokuluma ukudla? Ngelishwa, ukuhamba ngokukhawuleza kwexesha lokuphila kwenza ukuba utshintsho lwayo lube kukutya kwethu. Ngoko ke, ukuba uyidla ngokungalunganga, umzimba wakho awufumani iivithamini eziyimfuneko, i-macro-microelements, kunye nezinye izinto ezincedo eziyimfuneko ekusebenzeni ngokuqhelekileyo. Ngoko njani?
Ukulinganisela kuyo yonke into.
Indlela yokuphila enempilo yinkimbinkimbi yonke, equka inkqubo yezenzo ezithile. Kwaye inendima enkulu kule nto kukutya. Kwaye icandelo elongezelelweyo lidibeneyo ezenzelwe izityalo.
Ukupapashwa kwezidlo zokutya kuqale ngeMelika. Umzimba womntu unobunzima bevithamini kunye nezinye izinto eziyimfuneko. Ngoko ke, sinqume ukukhulula okulinganayo kwezondlo kwifomethi yefomathi.
Zonke izongezo ze-biological zihlukaniswe zibe ngamaqela amathathu, kwaye kufuneka zikhethwe ngokuxhomekeka kwiimfuno zenyama yazo.
Iqela lokuqala - i-nutraceuticals, equkethe izondlo, ezifana neevithamini, i-Omega-3 fatty acids, i-macro-microelements kunye nezinye izinto zokutya.
2. Iqela lesibini, ama-parapharmaceuticals, zibandakanya izithako ezingaphelelanga zemifuno yezokwelapha ukugcina imisebenzi yamalungu omzimba okanye umbutho wonke.
3. Iqela lesithathu, iiprobioti, ziphila ezincinci ezihlala emathunjini ethu kwaye ziyimfuneko ekusebenzeni ngokuqhelekileyo.
Khangela ukuba yeyiphi i-supplementary biological you need, ungenza ngokuhlalutya ngokubanzi, emva koko umculi wezilwanyana unokulucebisa ubunzima obuyidingayo. Ngokukodwa kwixesha elingaphandle kwexesha, xa singenasiphumo esitsha kunye nemifuno, umzimba udinga inkxaso ye-multivitamin.
Kwamazwe athuthukileyo, ukusetyenziswa kwezibonelelo zezinto eziphilayo kukhula ngokukhawuleza. Ngokomzekelo, eJapan, i-akhawunti yongeziweyo malunga ne-90% yabemi, e-US-80%, naseYurophu-malunga ne-50%. E-Ukraine, isicelo sabo sisesezingeni eliphantsi. Ngaphambili, kwiiphakheji ezininzi zee-biological supplements, babhala ukuba le mpilisi inokunyanga wonke umntu kunye nayo yonke into. Izitenxo ezinzulu ezinjalo zonakalisa ukholo kumveliso kwaye zalahlekisa abantu. Kuze kube ngoku, kukho imbonakalo yokuba izongezo zezinto eziphilayo ziyimveliso yonyango ephethe zonke izifo, inceda ukulahlekelwa isisindo, ukwandisa amabele, njalo njalo. IziHlomelo ayilona unyango. Bongezelela ukutya kunye nezinto ezingekhoyo. Ngokuqhelekileyo abantu bathembela kuphela kwizongezo njengoluhlobo lwepilisi yemilingo kwaye ngelo xesha bengawuthobeli imisebenzi ekhuthaza impilo, njengokuzilolonga, ukuphumla nokuphepha imikhwa emibi.
Ezi zongezo ze-biological kufuneka ziphathwe ngokulumkisa, kuba zingenazo izixhobo ezikhethekileyo zokulawula i-pharmacological. Ungazicwangcisi ngokwakho uqobo, qiniseka ukuba udibane nodokotela. Kwaye kubaluleke kakhulu - ungaqhubeki ngeentengiso kunye nezithembiso zayo. Ngaphandle koko, ukusetyenziswa kwezinto ezingaziwayo ze-biological kungaholela kwimiphumo emibi kwixesha elizayo. Khumbula ukuba kufuneka uthenge izongezelelo kwii-pharmacy kunye neevenkile ezizodwa. Imveliso kufuneka iqinisekiswe, kwaye unako ukujonga rhoqo umthamo wansuku zonke oyifunayo kwipakethe.
Ukuxhaswa kwezinto eziphilayo ezisebenzayo akuyona iyeza, kodwa ukongeza ukongeza ekudleni ukugcina impilo yakho.
Sisiphi isidlo esibuhlungu amazinyo
Iimpawu eziwusizo ze-salmon roe
Iimpawu kunye nokunyangwa kwe-nepsatal sepsis
Ungayilungisa njani isidlo sesonka?
Amathoyizi abantwana ukusuka konyaka ukuya kwiminyaka emithathu
Umqala womlomo: unyango
I-coat oatmeal kwivenkile ye-microwave
Umtshakazi ophelileyo-ukulungiselela umtshato
Imfihlelo emithathu yesibheno
Ama-blondes aBaziwayo kunye nama-sexy aseHollywood
U-Alexandra Zhulina uzizwa engaxhamli kunye nabahlobo be-Navka noPerkov